Xog: Golaha Wasiiradda Somalia oo isku shaandhayn lagu samaynayo. – Hornafrik Media Network
By HornAfrik	 On Aug 16, 2017
Golaha Wasiiradda Xukuumadda Federaalka Somalia ayaa lagu wadaa in isku shaandhayn lagu sameeyo Maalmaha soo socda, Waxaana socda la tashiyaddii ugu dambeeyay ee isku shaandhaynta Golaha Wasiiradda.
Raiisul Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa u gudbiyay qaabka uu doonayo inuu isku shaandhaynta u sameeyo Madaxwaynaha Jamhuuriyadda Federaalka Somalia, Maxamad Farmaajo oo isna dhiniciisa ku biiriyay Talooyin ay ku najixi karto Xukuumadda soo socota.
Hornafrik waxaa loo soo dusiyay qaabka uu u diyaariyay Shaxda Wasiiradda Cusub Khayre, Waxaana loo qaybiyay Wasiiraddan habkii hore ee wax lagu qaybsan jiray oo ahaa 4.5, iyadoona Shaxdan ay kaga duwan tahay kuwii hore waxa u Raiisul Wasaaruhu ku qoray Xil kasta oo Wasiirnimo 3 Qof oo isku beel ah, kuwaas oo la kala xulanayo midka ugu haboon, taasoo u muuqata in Wasiiraddan ay ku imaan doonaan Xulasho ee aysan magacaabis ku imaanayn.
Tusaale ahaan Wasaaradda Arrimaha Gudaha waxaa ku qoran 3 Qof oo midkood uu Xilkaas qaban doono, waxayna kala yihiin C/raxmaan C/Shakuur, Axmad Macalin Fiqhi, iyo C/raxmaan Oddowaa, halka Wasaaradda Maaliyadda ay ku qoran yihiin C/fitaax Geeseey, C/rashiid C/laahi Maxamad, iyo Qof Dumar ah, Wasiirka Gaashaandhiga oo ka imaan doona Puntland ayaa waxaa ku tartami doona 3 Qof oo halkaas ka soo jeeda, halka Wasaaradda Arrimaha Dibadda laga kala xulan doono 3 Qof oo Somaliland ah sida C/raxmaan Bayle, Xuseen Carab Ciise, iyo Maxamad Cumar Carte, Wasaaradda Amniga ayaa loo qorsheeyay in la kala xusho C/rashiid Xidig iyo 2 Qof oo kale ee oo Jubbaland ah.
Golaha Wasiiradda Cusub ee Somalia ayaa intooda badan ka imaan doona Siyaasiyiinta ku kacsan Xukuumadda uu hogaamiyo Raiisul Wasaare Khayre, si looga baaqsado in Xukuumadda Mooshin laga keeno.
Guddiga doorashada Madaxweynaha Hirshabeelle oo la magacaabay